GB ကို / T5310-2017 နျ Standard ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းအတွက်မြင့်မားသောဖိအားဘွိုင်လာဘို့တရုတ်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန် | ရွှေ Sanon
ငွေပေးချေမှုရမည့်: 30% သိုက်, 70%, L / C သို့မဟုတ် B / L မိတ္တူသို့မဟုတ်မျက်မှောက်မှာ 100% L ကို A / C
Min.Order အရေအတွက်: 1 ကို PC
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: Annual 20000 Tons Inventory of Steel Pipe
: အချိန်ဦးဆောင်လမ်းပြ အသီးအနှံမှစတော့ရှယ်ယာထဲမှာ 7-14 ရက်အတွင်းသည်မှန်လျှင်, 30-45 ရက်အတွင်း
ထုပ်ပိုး: Black ကကွယ်ပျောက်သည်တစ်ခုတည်းပိုက်များအတွက်ဘီဗဲလ်နှင့်ဦးထုပ်; ဆော့ဝဲအစုအဝေးအတွက်ထုပ်ပိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအစုအဝေးကိုအဘယ်သူမျှမ2တန်ချိန်ထက်ကျော်လွန်ဖို့ 219mm လိုအပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော OD ။
စံ: GB ကို / T5310-2017
grade Group မှ: 20G, 20MnG, 25MnG, etc
ပြင်အချင်း (က Round): 10 - 1200 မီလီမီတာ
အရှည်: Fixed အရှည်သို့မဟုတ်ကျပန်းအရှည် (6-12m)
အသုံးပြုမှု: ဘွိုင်လာနဲ့အပူ Exchange
စမ်းသပ်ခြင်း: Insight web studio ၏ / UT / Hydrau တည်ငြိမ်သော
အဓိကအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖိအားများနှင့်ဘွိုင်လာ၏မြင့်မားသောအပူချိန်ဝန်ဆောင်မှု (Superheater ပြွန်, reheater ပြွန်, လေလမ်းညွှန်ပြွန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြင့်မားသောဖိအားဘွိုင်လာဘို့အဓိကရေနွေးငွေ့ပြွန်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့အရေးယူမှုနှင့်ရေငွေ့အောက်, ပြွန်အောက်ဆီဒိုက်နှင့် corrode ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသံမဏိပိုက်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု, ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ချေးဖို့မြင့်မားသောခုခံ, ကောင်းသောအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းလိုအပ်ပါသည်။
20g, 20mng, 25mng: အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ၏ grade
အလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိတန်း: 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg, 12cr3movsitib, etc
သံချေး-ခံနိုင်ရည်အပူခံနိုင်ရည်သံမဏိတန်း: 1cr18ni9 1cr18ni11nb
B က 0,035 0,035
ကို C 0,030 0,030
အီး 0,025 0,020
D ကို 0,030 0,025
Q46O ကို C
Q500 ကို ကို C
D ကို 0,025 0,015
အီး 0,020 0,010
Q550 ကို C
D ကို 0,025 0.015
Q62O ကို C
J ကိုအဆိုပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာနိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေမရစေခြင်းငှါ, စားပွဲအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံကြောင်းအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်။ အယ်လ်, NB, V ကို, တီနှင့်နိုက်ထရိုဂျင် fixation နှင့်အတူအခြားအလွိုင်းဒြပ်စင်သံမဏိထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်, နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ နိုက်ထရိုဂျင် fixation အကြောင်းအရာအရည်အသွေးလက်မှတ်အတွက်သတ်မှတ်ရပါမည်။
'' အားလုံးလူမီနီယံ, AIT ^ 0,020% B ကစုစုပေါင်းလူမီနီယံအကြောင်းအရာအသုံးပြုတဲ့အခါ
L / T က
၂၄ / ၂၂%
၂၂ / ၂၀%
၂၀ / ၁၈%
၂၁ / ၁၉%
၂၀ / ၁၆%
မြို့ရိုးကိုအထူနှင့် Outter အချင်း:
အဘယ်သူမျှမကအထူးလိုအပ်ချက်များကိုလည်းမရှိလြှငျ, ပိုက် norminal outter အချင်းများနှင့် norminal နံရံအထူအဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ဂုဏ်န။ နောက်ဆက်တွဲစာရွက်အဖြစ်
ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ Method ကို
ပိုက်၏ Size ကို
hot (extrude) ပိုက်ရှင်းပြီ
Norminal outter အချင်း
± 0.75%: D
± 0.5%: D
S က> 35
± 1%: D
အငယျဆုံးသော + 1%: D သို့မဟုတ် + 5.Take တဦးတည်း一 2
+ 1%: D သို့မဟုတ် + 7, တဦးတည်း一2အငယျဆုံးသောယူပါ
± | ·丨)
+ 12.5% ​​S ကို
± 10% S ကို
± 7.5% S ကို
+ 12.5% ​​S ကို -10% S ကို
土10% S ကို
± 0.75% ။
+ 20% S ကို
-10% S ကို
+ 15% S ကို
-io ကို% s
± '' L1j
သံမဏိပိုက်၏ပုံမှန်အရှည် ~ 12 000 မီလီမီတာ4000 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဝယ်, နှင့်စာချုပ်ထဲမှာဝစွာအကြားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါ, 12 000 မီလီမီတာသို့မဟုတ်3000 မီလီမီတာထက်တိုတောင်းငါ 000 မီလီမီတာထက်တိုတောင်းသော်လည်းမထက်အရှည် သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူသံမဏိပိုက်ကိုအပ်နိုင်ပါတယ်, အတိုအရှည်သံမဏိပိုက်အရေအတွက်ထက်လျော့နည်း 4000 မီလီမီတာပေမယ့်မလျော့နည်း 3000 မီလီမီတာကယ်နှုတ်တော်မူ၏သံမဏိပိုက်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ 5% ထက်မပိုရကြလိမ့်မည်ထက်
သံမဏိပိုက်အမည်ခံပြင်အချင်းများနှင့်အမည်ခံနံရံအထူဒါမှမဟုတ်အမည်ခံအတွင်းအချင်းများနှင့်အမည်ခံနံရံအထူသည်နှင့်အညီကိုအပ်သောအခါ, သံမဏိပိုက်အမှန်တကယ်အလေးချိန်အညီကိုအပ်သည်။ ဒါဟာအစသီအိုရီအလေးချိန်အညီကိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သံမဏိပိုက်အမည်ခံပြင်အချင်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးမြို့ရိုးကိုအထူသည်နှင့်အညီကိုအပ်သောအခါ, သံမဏိပိုက်အမှန်တကယ်အလေးချိန်အညီကိုအပ်သဖြင့်, အဆိုပါပေးဝေရေးနှင့်ဝယ်လိုအားပါတီများညှိနှိုင်းရန်။ ထိုသို့စာချုပ်ထဲမှာညွှန်ပြနေသည်။ သံမဏိပိုက်ကိုလည်းသီအိုရီအလေးချိန်အညီကိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဝယ်ယူများ၏လိုအပ်ချက်များအရ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ဝယ်ယူအကြားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်, နှင့်စာချုပ်ထဲမှာအမှန်တကယ်အလေးချိန်နှင့်ဖြန့်ဝေသံမဏိပိုက်၏သီအိုရီအလေးချိန်အကြားသှဖေအောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရကြလိမ့်မည်:
က) လူပျိုသံမဏိ ပိုက်: ± 10%;
10 t ကိုတစ်နိမ့်ဆုံးအရွယ်အစားနှင့်အတူသံမဏိပိုက်၏ခ) တစ်ခုချင်းစီကိုအသုတ်: ± 7.5% ။
သံမဏိပိုက်ဟိုက်ဒရောလစ်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကိုစမ်းသပ်ရပါမည်။ အများဆုံးစမ်းသပ်ဖိအား 20 MPa ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုဖိအားအောက်, တည်ငြိမ်အချိန်မလျော့နည်း 10 s ကိုထက်ဖြစ်သင့်, နှင့်သံမဏိပိုက်ပေါက်ကြားသင့်ပါဘူး။
အသုံးပြုသူသဘောတူပြီးနောက်ဟိုက်ဒရောလစ်စမ်းသပ် Eddy လက်ရှိစမ်းသပ်သို့မဟုတ်သံလိုက် flux ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
ပိုပြီးစစ်ဆေးရေးလိုအပ်ကြောင်းပိုက် ultrasonically တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ရပါမည်။ အဆိုပါညှိနှိုင်းပါတီများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်နှင့်စာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားသောပြီးနောက်အခြား Non-ဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်းဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
22 မီလီမီတာထက်တစ်ပြင်အချင်း သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူပြွန်တစ် flattening စမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ မြင်နိုင် delamination, အဖြူရောင်အစက်အပြောက်, ဒါမှမဟုတ်အညစ်အကြေးအဘယ်သူမျှမတစျခုလုံးကိုစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါဝယ်ယူများ၏လိုအပ်ချက်များအရနှင့်စာချုပ်ထဲမှာဖော်ပြထား, ပြင်အချင်း≤76mmနှင့်နံရံအထူ≤8mmအတူသံမဏိပိုက်စမ်းသပ်ရုတ်တရက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု 60 °တစ် taper နှင့်အတူအခန်းအပူချိန်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအိုးပေါကျကှဲပွီးနောကျ, ပြင်အချင်း၏ရုတ်တရက်နှုန်းကိုအောက်ပါ table ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်, နှင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်းဒါကိုတော့သို့မဟုတ် rips မပြရမယ်
သံမဏိပိုက် /% ၏အချင်းရုတ်တရက်မှုနှုန်း Outter
အတွင်းစိတ်ချင်း / Outter အချင်း
နောက်တစ်ခု: APISPEC5L-2012 ကာဗွန်ချောမွေ့စွာသံမဏိလိုင်းပိုက် 46 ထုတ်ဝေ
hot ချောမွေ့စွာသံမဏိ Tube ရှင်းပြီ
40crmo အလွိုင်းသံမဏိပိုက် , လွိုင်းပိုက်ပေးသွင်း , P22 အလွိုင်းသံမဏိပိုက် ,